Ikhaya AMERICAN STARS I-Rodrygo Goes Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso ka-LB. Isikweletu kuMarca
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola okwaziwa ngegama elithi “Genius”I-New Neymar“. Indaba yethu yeRodrygo Silva de Goes yobuntwana kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawuleka kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
URodrygo Uhamba Udaba Lobuntwana- Ukuhlaziywa Kuze Kube Sesikhathini
Yebo, wonke umuntu uyazi ukuthi nguyena Oqhumisa Isikhali Esilulazayo Lokho I-Real Madrid Ayikwazanga Ukuphuthelwa. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-biography kaRodriygo Goes 'ezithakazelisa impela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
URodrygo Silva de Goes wazalwa ngosuku lwe-9th ngoJanuwari 2001 kunina, uDenise Goes nobaba, u-Eric Batista de Goes esifundazweni saseSao Paulo, eBrazil. Ngezansi isithombe sabazali bakhe abancane abahle.
URodrygo Uhamba Indaba Yempilo Yasekuqaleni. Ikhredithi ku- I-Marca.
URodrygo ungumkhiqizo womshado omncane kakhulu futhi ophumelelayo phakathi kwabazali bakhe lapho bobabili besebasha. Ubaba kaRodriygo u-Eric okwamanje uneminyaka engu-34 njengaleso sikhathi (Agasti 2019) sokubhala le ndatshana. Umama wakhe kufanele abe ngowakhe ekuqaleni kwe-30. Lokhu ngokusho ukuthi ubaba wakhe wayenaye lapho eseneminyaka engu-17 kuphela. URodrydo wazalwa njengomntwana wokuqala kubazali bakhe. Ukhule njengengane yabo okuwukuphela kwayo iminyaka, engenamfowethu noma udadewabo.
Umndeni kaRodrygo Goes unemvelaphi yawo uqhamuka kumasipala wase-Osasco esifundeni saseSao Paulo. Ungomunye womasipala abachuma kakhulu eBrazil ngezilinganiso ze-GDP.
URodrygo Uba Umsuka Womndeni. Ikhredithi ku- Umakhi
Idolobha eliphithizelayo laseSao Paulo lapho uRodrygo akhulela khona enezimoto eziningi kuneRio de Janeiro enabantu. Futhi, kungumuzi owaziwa ukuthi udla ama-pizza ayizigidi ezingama-1 aphuma emapayipini ayizigidi ze-1.6 adliwe yiwo wonke umphakathi waseBrazil.
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
URodrigo wakhulela emndenini osezingeni eliphakathi nendawo imali engenayo evela kwezemidlalo. Ubaba wakhe waqala impilo yokuba ngumdlali webhola emidlalweni ephansi yaseBrazil okwamtholela imali eyanele indlu yakhe. Njengoba wayenendodana yakhe esemncane, u-Eric owayazi ukuthi wayengeke aphumelele kakhulu emsebenzini wakhe. Unqume ukusebenzisa icebo lokuqhubeka nokuphila amaphupho akhe ebhola ngendodana yakhe, uRodrygo.
Kusekuqaleni kukaRodrygo, waqala ukuphunyula ibhola lakhe egumbini lokuhlala lomndeni wakhe, okwakubonisa ukuthi uyawuthanda lo mdlalo omnandi. Isifundo sebhola sasilandela ukubonga kokuqondisa kukababa wakhe. U-Eric owayethanda iReal Madrid waqinisekisa ukuthi indodana yakhe ilingisa amakhono nezindlela zomsebenzi Robinho labo ababecabanga ukuthi baphakeme kakhulu. URodrigo akagcinanga ngokuvezwa kumavidiyo we Robinho, kodwa bakopisha zonke izinyathelo zakhe. Eminyakeni engu-9 lapho ethola isibalo sokuhambela izivivinyo neSantos, ukuziqhenya kukayise kwakungekho mngcele.
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
URodrygo Goes ukuthanda ibhola kwambona edlula ezilingweni ngemibala endizayo futhi ejoyina i-academy yeSantos eyamnika isisekelo somsebenzi wakhe. Ngenkathi ukujoyina uhlelo lwentsha lweSantos kwi2010 eneminyaka engu-10. Abazali bakaRodrygo bagcizelele ukuthi indodana yabo kumele yabelwe eqenjini le-futsal team. Le bekuyindlela ethathwe isithixo somndeni webhola, akekho omunye umuntu kepha inganekwane Robinho.
Kusukela nje eneminyaka engu-10, uRodrygo waqala ukudlala nabafana ababemkhulu nabadala. Wayehlala emi emidlalweni yakhe njalo. Ukudlala uFutsal phambili kuye kumsize ukuthi abe necebo lokugcina ibhola ezinyaweni zakhe, edonsa abavikeli besikhathi esedlule futhi asebenzise ijubane lakhe ukushaya amagoli.
URodrygo Uhamba Ngempilo Yasemsebenzini. Isikweletu kuLanga
Lesi kwakuyisimfanelo esifanayo abenaso uRobinho phakathi nezinsuku zakhe zokuqala ukudlala noFutsal. Njengoba uRodrygo Waqhubeka nokuthuthuka, wazibona eqhubeka nokuhamba phambili phakathi kontanga yakhe. Lokhu kufaka ingcindezi njalo yokuthi enze lokho waba ngumphathi weqembu lakhe lentsha.
URodrygo Goes- Ukuba ngumholi osemncane. Isikweletu ku-IG
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Ngenkathi uRodrygo esondela kwi16, izinkulumo eziphathelene nezinkontileka nezobuchwepheshe zaqala. NgoMashi 2017, wabizelwa eqenjini lokuqala yimenenja uDorival Júnior. URodrigo wenza i-Copa Libertadores yakhe yokuqala kwi-1st kaMashi 2018 ephula irekhodi njengomdlali omncane kakhulu weSantos ukuvela kulo mncintiswano oneminyaka engu-17 nezinsuku ze-50 ubudala.
Ngemuva kwamasonto amabili nje emncintiswaneni ofanayo, uRodrygo washaya igoli lakhe lokuqala kulo mqhudelwano. Lokhu kwenza ukuthi abe umncane kunabo bonke abaseBrazil ukuthola amaphuzu eCopa Libertadores. URodrygo waphinde wanikezwa iCampeonato Paulista Best Newcomer ye2018.
URodrygo Uhamba noMklomelo weCampeonato Paulista. Isikweletu ku-IG
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
URodrygo wakhuthazelela ukukhuphuka kwesimo sezulu esiphakeme kwaba ukuvelela ukuba ngesinye sezindawo ezincane ezishisa kunazo zonke eNingizimu Melika, ukwenyuka okungafaniswa kuphela nalokho okutholwe yisithixo sakhe uRobinho. Amakhono akhe amangalisayo wokudonsa umdwebo aheha abakwa-Real Madrid scouts ababekhona ngaleso sikhathi ekuhlaselweni okungapheli kwabadlali baseNingizimu Melika, omunye wabo UVinicius Junior.
Lolu usuku olubaluleke kakhulu empilweni yakhe ekugcineni olwenzeka. Usuku uRodrygo afeza ngalo amaphupho akhe ngokusayinisela iReal Madrid isivumelwano esikhombisa ukuthi uzobhukishwa ngaphambi kwesikhathi. Ngokuqondile on I-15th kaJuni 2018, iReal Madrid ifinyelele esivumelwaneni neSantos sokudluliselwa kukaRodrygo, isivumelwano esenziwa ngonyaka olandelayo, ngoJuni 2019.
Okokuqala, kwakuwukulinda kweminyaka eyi-1, kwabe sekufika isikhathi esingumzwelo kakhulu ngoRodrygo Goes njengoba abazali bakhe behamba naye ekushoyo indlela ebivela enhliziyweni yakhe ekilabhini yakhe ayithandayo yobuntwana.
URodrygo Goes uyaxineka njengoba ekhuluma kahle kuSantos wakhe amthandayo. Isikweletu ku-IG
“Kungigqugquzela ukuya eMadrid, enye yamakilabhu amakhulu emhlabeni. Ngosayizi abakhulu bekilabhu, kuyesabisa kimi, kodwa ukwesaba okuhle. Kungigqugquzela ngokwengeziwe futhi kusho ukuthi kimi kufanele bakhombise ukuthi kungani bethembela kimi nokungisayina. ”
URodrygo uthe ngenkathi esayina.
URodrygo uyi ngempela enye ehamba phambili phakathi komugqa wokukhiqizwa okungapheli wokuya phambili okumangalisayo okuphuma eBrazil. Kithina, ubhekwa njengesithembiso esihle esilandelayo ebholeni laseBrazil ngemuva Neymar Jnr. Bonke abanye, njengoba bekusho, ngumlando.
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Uma ucabanga ukuthi abazali bakhe bashada phakathi neminyaka yabo yobusha, kufanelekile ukubuza ukuthi uRodrygo unentombi noma unkosikazi esemncane yini.
URodrygo Uhamba Ngobudlelwano Empilweni. Isikweletu ku-IG
Ukukhuphuka kukaRodrygo ukuze adume futhi ajoyine iReal Madrid kushiya abalandeli bakholelwa ukuthi a kungenzeka kube nomuntu othandana naye ocashile, mhlawumbe ongaphunyuka ekuhlolweni kwamehlo omphakathi ngoba impilo yakhe yothando iyimfihlo kakhulu futhi kungenzeka ayinangoma.
Njengasikhathi sokubhala, sikholwa ukuthi uRodrygo ukhethe ukugxila emfundweni yakhe futhi uye wafuna ukugwema noma ikuphi ukubukwa kwempilo yakhe yangasese, engashiyi nampendulo ngempilo yakhe yothando nangomlando wokuthandana naye.
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso okuphila komuntu siqu
Ukwazi uRodrygo Goes impilo yomuntu siqu kude nesikhuthi kungakusiza uthole isithombe esiphelele ngaye.
Kude nodonga, uRodrygo unesimo sangaphakathi sokuzimela esimenza enze inqubekela phambili enkulu empilweni yakhe. I-supernyar enemibala ephilayo iphila impilo ejwayelekile ngaphandle kwesigamu ngenkathi iseBrazil. Ukwahlulela lesi sithombe esingezansi, akufanele umangale ukubona uRodrygo ephethe isikeyboard emgwaqweni waseMadrid.
URodrygo Uhamba ne-Skateboard. Isikweletu ku-IG
Futhi empilweni yakhe, uRodrygo Goes unemfanelo yokuzithiba, amandla okwenza izinhlelo eziqinile nezingokoqobo ngempilo yakhe. Ungumholi ongahola indlela njengoba ibonwa ezinsukwini zakhe zobuphathi ezingeni lentsha.
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
URodrygo Goes abazali nezihlobo njengamanje bavuna inzuzo yokugxilisa isimo sengqondo esinzima kuye. Abazali bakhe bakwazile ukusekelwa kwendodana yabo ngeReal Madrid kusukela ekuqaleni komsebenzi wakhe. Bona ucezu lobufakazi bevidiyo ngezansi lapho uRodrygo oneminyaka engu-9 emi nabazali bakhe ngehembe elidala leReal Madrid. Lokhu kukhonjiswa eceleni kwesithombe esifanayo se-2019.
Izithombe zomndeni ukukhombisa ubufakazi bokuthi uRodrygo ubelokhu eyi-Real Madrid Fan kusukela ebuntwaneni. Ikhredithi ku- I-Marca.
Mayelana neRodrygo Goes Father: Ubaba kaRodrygo uneminyaka engu-34-ubudala njengangesikhathi sokubhala. Uthi bewazi?… U-Eric Batista ofanekiselwe ngezansi nendodana yakhe esanda kuthatha umhlalaphansi emsebenzini wakhe wokudlala njengomdlali ongakwesokunxele emuva futhi manje osephila ngokuphila kwamaphupho akhe njengonakekela umsebenzi wendodana yakhe.
URodrygo Goes noYise- Eric Batista de Goes. Isikweletu ku-IG
U-Eric Batista onabangani bakhe nezihlobo zakhe imbheka "njengomuntu"classical waseBrazil”Udlale imidlalo yeligi yeSao Paulo kulokho abaningi abangasho ukuthi ngumsebenzi ongaphumelelanga.
Mayelana neRodrygo Goes Umama: Uma kukhulunywa ngabathandi bebhola nge-Gorgeous Moms, singasho ukuthi uRodrygo Goes ubeka phezulu uhlu. UDenise Goes muhle hhayi kuphela kodwa mncane kakhulu (ekuqaleni kwakhe i-30's) ngesikhathi sokubhala.
URodrygo Uya Umama- UDenise Goes. Isikweletu ku-IG
Lapho ukhubeka esithombeni uqala ungazi ukuthi ungubani, ungafunga ukuthi uyintombi kaRodrygo.
URodrygo Goes Sibling: Eduze kwe-2018, abazali bakaRodrygo babenengane yentombazane, okwakunguye uRodrygo kuphela owayengudadewabo. Ukuba udadewabo omncane kwamenza wazizwa njengobaba futhi, eqaphela ukuthi wonke usekhulile. Njengoba kubonwe ngezansi, ukuxhumana okujulile kukhona phakathi kukamfowethu nodadewabo abancane.
URodrygo Goes ukhombisa uthando kudadewabo omncane. Isikweletu ku-IG
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - LifeStyle
Njengomlingani weqembu lakhe U-Takefusa Kobo, URodrygo naye unesisekelo esiqinile esivela kubazali bakhe. Ufundile ukuthi angagcina kanjani imali yakhe ebonga izisekelo zabazali bakhe. Njengasikhathi sokubhala, uRodrygo akavunyelwe ukuba aphile impilo yobukhazikhazi obonakala kalula ngamashele ezimoto ezibizayo.
URodrygo Goes LifeStyle Amaqiniso. Ikhredithi ku- Mirror
I-Rodrygo Goes Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Ukuthola Izibusiso Zama-Greats: Ngaphambi kokuya e-Europe ukujoyina iReal Madrid, uRodrygo uthole izibusiso ezivela kubasubathi bebhola abaseBrazil abahamba phambili okungukuthi UPele futhi Isikhulu uRonaldo.
URodrygo Goes kanye namaRow Models akhe
Ngawo lowo nyaka i-2001 lapho uRodrygo azalwa khona afakazela lokhu okulandelayo;
Okokuqala, lokho okwaziwa njengokuhlaselwa kwe-9 / 11 kwenzeka.
Lowo nyaka i-2001 yathathwa njenge "Ihlobo Lonyaka Woshaka“. Lo nyaka uqophe inani eliphakeme kakhulu lokuhlaselwa kukashaka womhlaba.
Ngonyaka u-2001 wabona izidakamizwa ze-Aids zixhaswe ngesaphulelo sama-90% adingekayo ukusiza ukulwa nalesi sifo esibulalayo ikakhulukazi e-Afrika.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iRodrygo Goes yethu Yobuntwana Indaba kanye ne-Untold Biography Facts. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.